I-DA neCosas bagxeka imiphumela ka-matric e-E Cape | News24
I-DA neCosas bagxeka imiphumela ka-matric e-E Cape
Port Elizabeth – Abafundi bakamatikuletsheni e-Eastern Cape benzelwe phansi wuhlelo lwezemfundo, lokhu kushiwo yiDA kanye neCosas ngemuva kokuthi lesi sifundazwe sishaye into esezingeni eliphansi kunazo zonke izifundazwe ngokwezibalo zemiphumela ka-matric kunyaka ka-2016.
Thola imiphumela yakho ka-matric lapha
“Abafundi bakulesi sifundazwe benzelwa phansi kambi ukuhluleka komnyango ukuhlangabezana nozibekele khona kanye nezinhlelo.
“Asikho isizathu sokubungaza,” kusho ilungu lesishayamthetho leDA, u-Edmund van Vuuren, esitatimendeni.
OLUNYE UDABA: Uthi usizwe ukungalali umfundi ophase ngamalengiso
UVan Vuuren uthi izinhlelo zokunciphisa izigceme zesifundazwe zisuka ku-23 ziye ku-12 kanye nokusungula amahhovisi angu-150 azikaqaliswa ngokugcwele.
Lesi sifundazwe sinezigceme ezingu-5 ezishaya into ephansi kunazo zonke ezweni, kanti isigceme ngasinye sithole ngaphansi kwa-50%.
Khonamanjalo iCongress of South African Students (Cosas) yona izwakalise ukuphoxeka ngale miphumela, yathi phezu kokuba ike yazwakalisa ukukhathazeka kwayo ngaphambilini ngezinga lokuphasa kwa-matric kulesi sifundazwe, kodwa “amazwi ethu afinyelele ezindlebeni ezingezwa”.
Unobhala wesifundazwe wale nhlangano, uSamkele Mqai, uthi akukwazi ukuthi ezigcemeni ezingu-23 asikho nesisodwa nje esithole ngaphezu kwa-90%.